Kooxo Badan Oo Isku Heystaan Adeega Devid Alaba
Home Suuqa kala iibsiga Kooxo badan oo isku heystaan adeega Devid Alaba
Manchester City kuma biiri doonto tartanka si ay ula soo saxiixato xidiga kooxda Bayern Munich David Alaba Xiddiga reer Austaralia ayaa noqon doona mid xor ah xagaagan iyadoo qandaraaskiisa uu la galay kooxda heysata horyaalnimada Yurub uu dhacayo.
Bayern ayaa muujisay xiisaha ay u qabto kordhinta heshiiska 28 jirka ee kooxdeeda si kastaba ha noqotee iyada oo wadahadalada ay gaareen heerkii ugu dambeeyay bishii November ay si dhaqso leh uga laabteen dalabkoodii.
Devid Alaba waxaa raadinaya kooxo badan oo weyn sida Liverpool, man city, barcelona, iyo Real madrid oo lasoo werinayo in heshiis goor hore la gaareen xidigaan walloow markii dambe ay isaga hartay Manchester City doonistiisa
In ka yar lix bilood ayaa ka hartay heshiiskiisa haatan, Alaba wuxuu xor u yahay inuu la hadlo loo kooxdii uu doono In kasta oo Los Blancos ay u muuqato inay xaqiijineyso qabashada daafaca buuxa, aabihii Alaba wuxuu xaqiijiyey inaysan jirin wax la isku raacay ilaa iyo haatan, in kasta oo ay u muuqato in Manchester City aysan wax damac ah ka qabin inay u soo jiitaan Premier League.
MEN ayaa soo werisay in Pep Guardiola uusan xiiseyneynin inuu u dhaqaaqo daafaca isku fiican yihiin ha ahaato suuqa kala iibsiga Janaayo ama marka uu noqdo mid xor ah suuqq xagaaga.
Dhibaatooyinka daafaca bidix ee City ayaa si wanaagsan loo diiwaangeliyay xilli ciyaareedyadii la soo dhaafay, iyadoo Oleksandr Zinchenko, Joao Cancelo iyo Benjamin Mendy ay dhamaantood fursad u heleen dhanka bidix ee daafaca bilihii la soo dhaafay.
Previous articleMan United oo bartilmaameedsan doonta Ousmane Dembele hadii lagu guuldareysto Jadon Sancho dalabkiisa
Next articleThomas Tuchel oo sheegay inuu Timo wirner kusoo celin doono sidiisii hore.